Wararka -Shiinaha 10-aad ee Suuqa Agabka Agabka-Ceeriin ee Madal-dhamaadka Sare ayaa Lagu Qabtay Online Hormarinta Cagaar-yar ee Kaarboon-yar
Noofambar 12, 2021, “2021 (Tobnaad) Forum-dhamaadka Sare ee Shiinaha's Steel Materials Market” oo leh hal-ku-dheg ah "Labada Yoolalka Kaarboon Kaarboon ee Hogaaminaya iyo Xaqiijinta Amniga Kheyraadka" ayaa si guul leh loogu qabtay khadka, taas oo ah qayb muhiim ah oo ka mid ah dhismaha ee warshadaha alaabta ceeriin birta ka hooseeya asalka "dual carbon". Silsiladda sahayda ee tayada sare leh, xaqiijinta saadka iyo xasiloonida qiimaha, iyo qorshaynta sayniska ee horumarinta istiraatijiyadeed ayaa aasaasay madal isgaarsiineed oo wanaagsan.
Madashan waxaa kafaala qaaday Machadka Qorshaynta iyo Cilmi-baadhista Wershadaha Metallurgical, iyo Shabakadda Qorshaynta Metallurgical ee Shiinaha waxay siisaa taageerada shabakadda golahan. Ku dhawaad ​​30-warbaahineed oo gudaha iyo dibaddaba ah ayaa si weyn uga hadlay oo madashan ka warbixiyey. Fan Tiejun, Hormuudka Machadka Qorshaynta iyo Qorsheynta Warshadaha Metallurgical, iyo Jiang Xiaodong, Madaxweyne Ku-Xigeen, ayaa hogaaminayay shirarkii subaxii iyo galabtii siday u kala horreeyaan.
The China Steel Material Market Material Market Forum High-dhamaadka waxa si guul ah loo qabtay sagaal kulan oo noqday hogaanka sare ee madal wada hadalka warshadaha ee. Waxay door wanaagsan ka ciyaartay kor u qaadida horumarka, isbeddelka, iyo hagaajinta warshadaynta birta ee dalkayga, waxaanay sumcad wanaagsan ku yeelatay warshadaha.
Luo Tiejun, oo ah gudoomiye ku xigeenka ururka birta iyo birta ee Shiinaha, ayaa madashan khudbad ka jeediyay, waxaanu u hambalyeeyay madasha isaga oo ku hadlaya magaca ururka birta iyo birta ee Shiinaha. Madaxweyne ku xigeenka Luo Tiejun wuxuu soo bandhigay xaaladda guud ee shaqada warshadaha birta ee dalkayga iyo hawlaha ganacsiga ee sanadkan, oo ku salaysan xukunka deegaanka horumarinta gudaha iyo dibadda, jihaynta siyaasadda iyo jihada warshadaha, wuxuu soo bandhigay saddex talobixin oo ku saabsan horumarinta dabagalka. ee warshadaha birta ee dalkayga: Marka hore, sameeyo hab wax ku ool ah oo suuqa ku jihaysan warshadaha is-edbinta si wax ku ool ah u ilaaliso nidaamka suuqa. Waa in la sameeyaa hannaan cusub oo aan lahayn oo keliya isticmaalka tamarta iyo siyaasadda ka-saarista kaarboonka, laakiin sidoo kale leh is-edbinta warshadaha iyo kormeerka dawladda oo si wax ku ool ah u waafaqaya shuruucda suuqa iyo shuruudaha suuqa. Midda labaad waa in la dardargeliyo horumarinta kheyraadka birta, lana xoojiyo awoodda dammaanadda kheyraadka. Waa in la isku dayo in la balaadhiyo horumarinta kheyraadka miinada gudaha, si xooggan loo taageero balaadhinta iyo xoojinta silsiladda warshadaha ee soo kabashada iyo dib-u-warshadaynta walxaha birta ee dib loo warshadeeyey, lana dardargeliyo horumarinta miinada sinnaanta ee dibadda. Midda saddexaad waa in la sameeyo garoon lagu ciyaaro oo heersare ah oo kor loo qaado hagaajinta qaabdhismeedka iyo horumarinta tayada sare leh. Dhismaha tamarta sare-isticmaalka iyo mashaariicda sare-u-qaadista waa in si adag loo xaddidaa si loo sameeyo jawi tartan ah oo ah "badbaadinta lacagta ugu fiican iyo lacagta wanaagsan ee bixinta lacag xun", iyo kor u qaadida xakamaynta adag ee guud ahaan awoodda wax soo saarka iyo hagaajinta qaab dhismeedka warshadaha iyada oo loo marayo qiiqa kaarboonka, tilmaamayaasha isticmaalka tamarta iyo qiiqa aadka u hooseeya, waxayna kor u qaadaan warshadaha cagaaran, kaarboon yar iyo horumarin tayo sare leh.
Niu Li, oo ah agaasime ku xigeenka Waaxda Saadaasha Dhaqaalaha ee Xarunta Warfaafinta Gobolka, ayaa soo saartay warbixin muhiim ah "Siyaasad Soo-kabasho Dhaqaale oo Joogto ah Dib-u-soo-noqosho Dhex-dhexaad ah iyo Falanqaynta Xaaladda Dhaqaale ee Dibadda iyo Siyaasadda Dibadda", marka loo eego aragtida deegaanka dhaqaalaha adduunka ee 2021, sida horumarka dhaqaale ee dalkeyga 2021, Waxaa jira afar dhibaato oo waaweyn ee dhaqaalaha Shiinaha hadda, iyo rajada dhaqaalaha Shiinaha sanadkan iyo sanadka soo socda. Waxay saadaalisay xaaladda hadda jirta iyo isbeddellada mustaqbalka ee horumarinta dhaqaalaha gudaha iyo dibedda, waxayna diiradda saartaa falanqaynta arrimaha ugu muhiimsan ee saameeya isbeddelka qiimaha wax soo saarka warshadaha iyo kor u kaca qiimaha dibadda ee wax soo saarka warshadaha. arrin. Agaasime ku xigeenka Niu Li ayaa sheegay in dhaqaalaha Shiinaha ee hadda jira uu leeyahay adkaysi ku filan, awood weyn iyo firfircooni cusub si ay si wax ku ool ah u taageeraan kobaca joogtada ah ee dhaqaalaha Shiinaha. Guud ahaan, ka-hortagga iyo xakamaynta cudurrada faafa ee waddankeygu waxay noqon doonaan kuwo caadi ah 2021, siyaasadaha dhaqaalaha guud waxay ku soo laaban doonaan sidii caadiga ahayd, hawlgallada dhaqaale waxay si tartiib tartiib ah u noqon doonaan kuwo caadi ah. Tilmaamaha kobaca dhaqaalaha ee kobaca dhaqaalaha iyo kala duwanaanta qaybaha kala duwan ayaa ah mid cad, oo muujinaya xaalad "sare oo hore iyo hoose ee dhabarka". Waxaan rajeynayaa 2022, dhaqaalaha dalkaygu wuxuu si tartiib tartiib ah u eegi doonaa inuu si caadi ah u shaqeeyo, heerka kobaca dhaqaaluhu wuxuu u janjeeraa heerka kobaca ee suurtagalka ah.
Warbixin cinwaan looga dhigay "Falanqaynta Qorsheynta Kheyraadka Macdanta iyo Isbeddellada Maamulka Miinada", Ju Jianhua, oo ah Agaasimaha Waaxda Ilaalinta Kheyraadka Macdanta iyo Kormeerka Wasaaradda Kheyraadka Dabiiciga ah, ayaa soo bandhigtay saldhigga diyaarinta, howlaha ugu muhiimsan iyo horumarka shaqada ee qaranka iyo deegaanka. qorsheynta kheyraadka macdanta. , Waxaan lafa guray dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ka jira kheyraadka birta ee dalkayga iyo sida uu u socdo maamulka kheyraadka macdanta. Agaasime Ju Jianhua waxa uu tilmaamay in xaaladaha aasaasiga ah ee macdanta dalkaygu aanay waxba iska beddelin, meeqaamkoodii iyo doorkii ay ku lahaayeen xaaladda guud ee horumarinta qaranka aanay waxba iska beddelin, adkaynta khayraadka iyo caqabadaha deegaankana aanay waxba iska beddelin. Waa in aan u hoggaansanahay mabaadii'da "fekerka gunta hoose, xoojinta dalka, qoondaynta suuqa, horumarinta cagaaran, iyo iskaashiga guul-guud" , xoojinta badbaadada macdanta muhiimka ah, kor u qaadida isku-dubbaridka horumarinta khayraadka iyo ilaalinta deegaanka, iyo dhisidda nabdoon, cagaar, iyo nidaamka dammaanad qaadka khayraadka. Waxa uu sheegay in warshadaha birta iyo birta ee dalkaygu ay ka taageeraan dhinacyada muhiimka ah ee horumarinta dhaqaalaha iyo bulshada. Si loo sii xoojiyo awoodda dalka iyo warshadaha ee dammaanadda macdanta birta, waa in saddex arrimood lagu tixgaliyaa habka baadhista khayraadka birta iyo qaabaynta qorshaynta horumarinta: Kow, in la xoojiyo sahaminta khayraadka gudaha laguna dadaalo sidii loo gaadhi lahaa Horumar xagga rajada; Midda labaad waa in la wanaajiyo qaabka horumarinta birta iyo in la dejiyo awoodda sahayda birta; Midda saddexaad waa in la hagaajiyo qaab-dhismeedka horumarinta iyo ka faa'iidaysiga kheyraadka macdanta birta.
Zhao Gongyi, Agaasimaha Xarunta Kormeerka Qiimaha ee Komishanka Horumarinta Qaranka iyo Dib-u-habaynta, warbixinta "Dhaqdhaqaaqa iyo Muhiimadda ay leedahay Soo-saarista Tallaabooyinka Maareynta Qiimaha Dalkeyga", si qoto-dheer u fasiraado "Tallaabooyinka Maareynta Habdhaqanka Habdhaqanka Qiimaha Tusmada" ee la faafiyay. Guddiga Horumarinta iyo Dib-u-habaynta Qaranka ee sanadkan (oo hadda loo yaqaan "Measures"), ayaa tilmaamay in dib-u-habaynta qiimaha ay tahay nuxur muhiim ah iyo isku xirka muhiimka ah ee dib-u-habaynta nidaamka dhaqaalaha. Jawaabta dabacsan, ujeedada iyo jawaabta dhabta ah ee calaamadaha qiimaha ayaa ah shardi muhiim ah oo si buuxda loo geliyo doorka muhiimka ah ee suuqa, hagaajinta hufnaanta qoondaynta khayraadka, iyo kicinta firfircoonida suuqa. Isku-dubarid iyo siideynta tusmooyinka qiimaha tayada sare leh waxay door muhiim ah ka ciyaaraan nidaaminta iyo hogaaminta horumarinta qiimaha macquulka ah iyo hagaajinta dareenka calaamadaha qiimaha. Agaasime Zhao Gongyi ayaa sheegay in soo saarista iyo hirgelinta "Tallaabooyinka" ay ka tarjumayso nidaamka maaraynta qiimaha leh sifooyinka Shiinaha, taas oo ah wakhti ku habboon oo lagama maarmaanka u ah in lala tacaalo xaaladda qiimaha adag ee hadda jira ee alaabta muhiimka ah; Ma keenin oo kaliya in tusmada qiimaha dalkayga uu galo heer cusub oo la jaanqaadi karo, balse waxa ay soo bandhigtay shuruudaha oo ay tilmaamtay jihada loo marayo tusmaynta qiimaha, waxaanay abuurtaa marxalad loo galo tartanka suuqa qiimaha gudaha iyo dibadda, kaas oo ah mid aad u wanaagsan. muhiimadda ay leedahay xoojinta maamulka qiimaha dawladda iyo u adeegidda dhaqaalaha dhabta ah.
Yao Lei, oo ah injineer sare oo ka tirsan Machadka Cilmi-baarista Suuqa Macdanta, Xarunta Cilmi-baarista Macdanta Caalamiga ah, Shiinaha Geological Survey, ayaa bixiyay warbixin cajiib ah oo cinwaankeedu yahay "Falanqaynta Xaaladda Khayraadka Birta ee Caalamiga ah iyo Talooyinka Badbaadada Khayraadka Birta", kaas oo falanqeeyay xaaladda cusub. khayraadka birta caalamiga ah. Marka la eego aragtida hadda jirta, qaybinta macdanta birta ee adduunka ee cirifka woqooyi iyo konfureed ayaa leh deeqo badan, sahayda iyo dalabaadkana way adagtahay in la beddelo muddada gaaban; Tan iyo markii uu cudurku dillaacay, labada daraf ee macdanta birta ee caalamiga ah, alaabada iyo baahida birta cayriin iyo qashinka ayaa daciifay; Celceliska qiimaha birta qashinka ah ee caalamiga ah iyo qiimaha macdanta birta inta lagu jiro cudurku Isbeddelka guud wuxuu ahaa "√" ka dibna hoos u dhacay; Giants birta wali waxay ku leeyihiin oligopoly silsiladda warshadaha birta ee caalamiga ah; Awoodda dhalaalidda birta iyo birta ee beeraha warshadaha ee dibedda ayaa si tartiib tartiib ah u kordheysa; Saddexda shirkadood ee ugu waaweyn ee macdanta birta ah ee adduunka ayaa isticmaala markii ugu horreysay RMB dejinta xuduudaha. Marka la eego sida loo xoojiyo ilaalinta kheyraadka macdanta birta ee dalkayga, injineer sare Yao Lei ayaa soo jeediyay in la xoojiyo ka faa'iidaysiga guud ee birta qashinka gudaha iyo kheyraadka birta, dhiirigelinta ganacsiyada in ay "si wadajir ah u tagaan caalami", iyo xoojinta iskaashiga awoodda caalamiga ah.
Jiang Shengcai, Xoghayaha Guud ee Ururka Shiinaha ee Metallurgical iyo Shirkadaha Macdanta, Li Shubin, Agaasimaha Guddiga Khabiirka ee Ururka Codsiga Birta ee Shiinaha, Cui Pijiang, Guddoomiyaha Shiinaha Coking Association, Shi Wanli, Xoghayaha Guud ee Shiinaha Ferroalloy Association, Xoghayaha ee Guddiga Xisbiga iyo Madaxa Injineer ee Qorshaynta Wershadaha Birta iyo Machadka Cilmi-baarista, Academician Dibadda ee Academy Ruush ee Sayniska Dabiiciga ah Li Xinchuang, ka hoos-hoosaadka miinooyinka birta, birta qashinka, coking, ferroalloy, iyo birta iyo warshadaha birta, diiradda saaraya birta caalamiga ah. Baahida Macdanta ee ka kooban Dual-Carbon asalka ah iyo saamaynta ay ku leedahay soo saaridda macdanta birta ee dalkayga iyo baahida, iyo falanqaynta xaaladda hadda jirta iyo horumarka ka faa’iidaysiga birta iyo birta ee dalkayga. Hadafka lagu horumarinayo horumarinta tayada sare leh ee warshadaha, hadafka dual-carbon wuxuu kor u qaadaa cusboonaysiinta warshadaha ferroalloy, iyo hadafka dual-carbon ayaa horseedaya dhismaha nidaamka dammaanadda sahayda alaabta ceeriin ee dalkayga si loo wadaago cajiib ah.
Khudbadaha cajiibka ah ee martida madashan waxay ka caawiyeen warshadaha alaabta ceeriin ee dalkayga inay fahmaan shuruudaha siyaasadda cusub, aqoonsadaan xaaladaha cusub ee horumarinta, iyo hagida shirkadaha warshadaha si ay si firfircoon ula qabsadaan isbeddelka suuqa, si cilmiyeysan u qorshee xeeladaha horumarinta, iyo hagaajinta awoodda amniga alaabta ceeriin. iyo awoodaha maareynta khatarta.
Madashani waxay diiradda saartaa mawduucyo kulul sida hanuuninta dhaqaalaha iyo siyaasadda, cagaarka, kaarboon-hooseeya iyo horumarinta tayada sare ee warshadaha alaabta ceeriin, isku dubaridka iyo horumarinta isku dhafan ee silsiladda warshadaha, iskaashiga macdanta caalamiga ah, ilaalinta kheyraadka iyo mawduucyo kale oo kulul. iyada oo loo marayo falanqaynta xaaladda, tarjumaadda siyaasadda, soo jeedinta istaraatiijiyadeed iyo waxyaabo kale oo xiiso leh iyo qani Waxay soo jiidatay in ka badan 13,600 oo qof qolka baahinta tooska ah si ay u daawadaan shirka, uga qaybgalaan doodaha, iyo la falgalaan fariimaha. Hogaamiyaasha iyo wakiilada inta badan shirkadaha birta, shirkadaha macdanta, iyo shirkadaha la xidhiidha silsiladaha warshadaha alaabta ceeriin, hay'adaha cilmi-baarista, hay'adaha maaliyadeed, iyo machadyada ajnabiga ah ay ka qaybqaateen online. Karaa
Waqtiga boostada: Nov-14-2021